Fametrahana Firefox OS 2.0 amin'ny Alcatel One Touch Fire miaraka amin'ny Linux Mint | Avy amin'ny Linux
marianogaudix | | Tutorials / Manuals / Tips
Salama mpampiasa GNU / Linux, lazaiko aminareo fa vao haingana aho no nividy Alcatel One Touch Fire ho an'ny asa, finday ambany izay manampy ahy amin'ny asako isan'andro.
Tamin'ny fividianako dia nanapa-kevitra ny hijery sy hahafantatra aho Firefox OS. Tena tiako ny fahatsoran'ny système d'exploitation sy ny fampiasa azy mba hanatanterahana ireo lahasa ifotony amin'ny finday.
Ny telefaona Alacatel One Touch Fire dia miaraka Firefox OS 1.1Ny zavatra tsy hitako teo noho eo dia ireo toe-peo, satria tsy azo ovaina mora ireo. Nanomboka nahita momba ny olana momba ny fanovana ireo antso an-tariby ao aho Firefox OS 1.1. Mitady fampahalalana aho tonga tamin'ny fehin-kevitra fa tsara kokoa ny mametraka ireo kinova vaovao an'ny Firefox OS.
Izany no nahitako famakiana tutorial sy fitsapana ary hadisoana Famoahana mialoha ny Firefox 2.0 miaraka amin'ny fampiharana ny fametrahana ny Firefox 2.0 dia vita ao anatin'ny 10 ka hatramin'ny 15 minitra.
Andao mankany amin'ny fomba fametrahana Firefox OS 2.0.
1 Fepetra takiana taloha:
2 Fametrahana Firefox OS 2.0
Fepetra takiana taloha:
Asaivo amin'ny maody fampivoarana ny telefaona.
Safidio ny sarin'ny tianao ary sintomy avy https://vegnuxmod.wordpress.com/hamachi-alcatel-otf/
Amin'ity boky ity izahay dia hampiasa Firefox 2.0 mialoha ny famotsorana "sary-hamachi-v2.0-20140629″ Raha ny ahy dia nisintona aho, nanala zip-bokotra ary nametraka ilay sary “sary-hamachi-v2.0-20140623.tar”.
Ampidino ity rakitra ity: http://adf.ly/poV7o
Esory ny karatra SIM sy SD-tsika raha tsy izany.
Ampidino ireo tranomboky fitaovana Android hametrahana Android sy Firefox OS:
Mametraka ireo tranomboky amin'ny terminal napetrakao:
sudo apt-mahazo mametraka Android-Tools-adb
Fametrahana Firefox OS 2.0
Manokatra terminal izahay ary manatanteraka ireto manaraka ireto:
Manoratra ny teny miafinay izahay.
Avy eo dia mankany amin'ny làlan'ny lahatahiry ny sary izahay
raha ny ahy dia ao anaty fampirimako manokana ireo sary a Napetrako tao amin'ny terminal-ko:
Avy eo dia manoratra ao amin'ny terminal izahay:
Ny rakitra fastboot Hiseho maitso izy io milaza fa azo ampiharina.
Ataontsika azo tanterahina ity rakitra manaraka ity fastboot napetrakay tao amin'ny terminal:
Avy eo dia vonoinay ny telefaona mbola mifandray amin'ny tariby usb amin'ny PC. Raha vantany vao maty ny telefaona finday dia hanomboka indray izany, noho izany dia tsy maintsy miditra isika Bootloader mode. Mihazona mafy isika Boky (-) + voaroaka miaraka mandritra ny 5 na 7 segondra vantany vao averinao ny telefaona.
Mba hijerena raha miasa dia napetrakay ao amin'ny terminal:
Fitaovana $ ./fastboot
Farany dia arahinay tsirairay ao amin'ny tobinay ireto baiko manaraka ireto:
$ ./fastboot flash boot boot.img $ ./fastboot flash userdata userdata.img $ ./fastboot flash system system.img $ ./fastboot flash recovery recovery.img $ ./fastboot esory cache $. / fastboot reboot
Avelako ho anao ny bokiko mini.
Eto aho dia mamela ny dingana hazavaina tsara amin'ny sary
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Tutorials / Manuals / Tips » Fametrahana Firefox OS 2.0 amin'ny Alcatel One Touch Fire miaraka amin'ny Linux Mint
Hatramin'ny nividianako an'ity telefaona ity herintaona lasa izay dia nitady fomba hanavaozana azy aho, ary ny tsara indrindra dia ny Linux. Anio hariva aho hanandrana, hijery ny fandehany.
Misaotra indrindra namana, raha mahazo sary ofisialy Firefox OS avy amin'ny tranokala ofisialin'i Mozilla ianao dia ampitao amiko ny angona, tsy azoko izany indrisy.
Afaka 10 minitra eo dia mahandro ny fametrahana Firefox OS ianao.
Ny tsara indrindra vintana, ampahafantaro ahy raha manana olana ianao.
Ary raha misy ny olana, na tsy tiako ny fametrahana ary te-hamerina ny fametrahana voalohany, azo atao ve ny manamboatra backup?
Manome ny baiko ianao, nefa tsy manazava akory izay ataon'izy ireo… izay ankoatry ny famelana rohy dokambarotra manidina wtf!…. Tsy haiko ny fomba namelan'izy ireo anao hamoaka an'ity toy izao eto xDDD
Miala tsiny aho, fa tsy te-hanao vivery ny findaiko ary tsy mandeha ... mila izany isan'andro aho. Eny te-hanavao ny OS aho, fa tsy toy izao.
Vintana na /
Ny rohy miaraka amin'ny Ads Fly satria tsy afaka nandinika azy io aho, satria nanitsy an'ity lahatsoratra ity tamin'ny fifandraisana an-telefaona aho. Na izany aza, raha misy olona tsara fanahy milaza amiko raha toa ka sandoka na zavatra toa izany ny Ads Fly handefa azy io dia hanoninay izany. Manala an'io, rangahy, inona no vidinao raha tsindrio ny Skip Ads? XDD
ErunamoJAZZ dia manana fotoana hanomezana hevitra momba ny From Linux.
Fa toa tsy manam-potoana handehanana amin'i Goog ianao ary hikaroka sary ofisialy Firefox OS amin'ny Internet ary hametraka XDD.
Satria manam-potoana hanomezana hevitra eto ianao ary hivarotra setroka.
ErunamoJAZZ dia tsy maintsy mitady kinova ofisialy sy taloha an'ny Firefox OS ianao.
ary apetaho, raha tsy tianao ny Firefox 2.0 / 2.1.
Ny rakitra ny rohy dokambarotra manidina, dia ohatra.
Noho izany, avelao ny rohy lehibe, ahafahanao misintona kinova samihafa amin'ny Firefox OS
Rehefa mametraka kinova fanavaozana ny Firefox OS na ny teo aloha ianao dia mamolavola ny telefaona findainao manontolo ny fametrahana.
Tsia tsia! Tena miala tsiny aho raha toa hoe manafintohina na zavatra hafa, tsy nisy fotoana ny fikasako hanapotika an'io na zavatra toa izany, raha tsy rehefa nahita hoe "tony" ilay fanazavana dia tsy afaka nangina aho ... eritrereto izany fomba: amin'ny toerana hafa (alaivo sary an-tsaina angamba ilay toerana niavian'i Arzantina izay ahitanao ny zava-drehetra sy ny "masinina") dia ny fomba "kopia sy apetaka" no anazavana, ary feno sary, na inona na inona ataon'ny baiko na ho an'ny izy ireo dia… manokana, satria mpamorona aho, mieritreritra aho fa tsy misy dikany izany zavatra izany… noho izany dia tsara kokoa ny mandeha mamaky ilay boky noho ny mitady fanazavana amin'ny Internet.
Mikasika ny googling, mazava ho azy fa manana aho, fa tsy hitady ireo sary any amin'ireo tranonkala izay tsy fantatro akory (azafady noho ny fiahiahako, saingy tsy matoky ny binary aho, src fotsiny), dia naleoko nanao izany irery nomaniny ho solon'izay ny findaiko manokana, ary satria efa niainanao ny momba an'io dia nanantena karazana valiny momba izany aho ... na dia "tsy haiko aza."
Miaraka amin'ny rohy fanaovana dokam-barotra ... dia mahatezitra ahy fotsiny izany ... fahatezerana ara-batana xD, ary amin'ny ankapobeny satria tsy fantatro hoe iza no handray soa amin'ny valisoa ho an'ny doka aseho ao.
Miala tsiny amin-kitsim-po aho noho ny feo ratsy nataoko, ny hany tanjoko amin'izany dia ny tsy hamela ny bilaogy ho lo miaraka amin'ny lahatsoratra sy fanazavana fa tsy tsotra, dia tsy misy dikany.
Fiarahabana na /
Niandry anao izy hampiseho amiko ny nomaniny ho solon'izay amin'ny findainao ary avy eo mampakatra ny lahatsoratrao manokana avy amin'ny From Linux momba ny fomba hametrahana Firefox OS, amin'izay dia ho hitantsika hoe iza no antonony roa amin'izy roa.
Toa zazakely ianao. Satria tsy maintsy manazava didy mora aminao aho, toy ny fidirana amin'ny mode superuser ("root") na ny fitadiavana lahatahiry. Ny mpampiasa rehetra izay mametraka fizarana Gnu / Linux amin'ny famakiana lahatsoratra iray dia mahalala izay dikan'izany:
Raha miresaka momba ny TARINGA ianao dia tsy misy ifandraisany amin'izany, izaho manokana no namorona ity lesona ity satria namela rohy fampidinana aho, toa tsy hitanao ilay rohy fampidinana avy amin'ny Mediafire.
TPM dia hoy izy:
Tena pro marianogaudix ianao ... «mpanohana»
Valio ny TPM
araka ny lazain'ny renibeko, aza manazava fa manjary maizina ...
Ridercoss dia hoy izy:
Ny fanomezana safidy fanavaozana hafa dia ankasitrahana sy ankasitrahana tokoa. Ny Vegnux MOD dia niasa ho ahy hanavao izany avy amin'ny Windows ka hatramin'ny kinova 2.1, mandraka ankehitriny tsy misy olana. Izy io koa dia manana ".sh" hanatanterahana izany amin'ny Linux, saingy raha ny marina dia manomboka fotsiny aho ka tsy dia manana hevitra firy momba io lohahevitra io. Andro tsara.
Mamaly an'i Ridercoss
Vao avy nametraka ny RON an'ny Firefox OS 2.1 avy amin'ny vegnuxmod ny ROM v2.1 20150328 aho, na dia prerelease ROM aza dia mandeha tsara amin'ny Alcatel One Touch Fire-ko.
Toa mahaliana izany, omaly aho nametraka CyanogenMod11 tao amin'ny Samsung Galaxy s5630L, ary nahavita nanao ny takelaka tsy misy fikitika amin'ny alàlan'ny VNC, miaraka amin'ireo baiko ireo ihany. Tutorial tsara.
Mamaly an'i andrew
Tena tsara. Ankehitriny dia manana antony bebe kokoa ahazoana Firefox OS aho.
Saingy ny pejy izay mampifandray ny namana Mariano dia tsy misy afa-tsy amin'ny maodely OT4012.
Mamaly an'i rainerhg
Ity ambany ity, namana jrlafaurie tamin'ny fanehoan-keviny namela ahy rohy fampidinana iray hafa ho an'ny Alcatel One Touch Fire, zahao ilay rohy.
Avelao aho hilaza aminao fa nianatra nametraka Firefox OS tamin'ny tranokala Mozilla ofisialy tamin'ny fitaovana mifanaraka amin'ny Firefox OS aho. Amin'ny Alcatel One Touch-ko dia tsy mandeha izany indrisy
Mila misintona ny sary miorina Base v18D.zip etsy ambany ianao, manazava ny fomba fametrahana ny sary izany
Firefox OS 2.0 stable. Raha manana fisalasalana ianao dia hanampy anao aho
Avelako ho anao ny tutorial ofisialy Mozilla miaraka amin'ny sary ofisialy.
etsy ambany misy tutorial momba ny fametrahana azy ireo
Te hametraka azy ireo aho saingy tsy manohana an'i Alcatel One Touch Fire i Mozilla.
Fa haiko ny mametraka ireo sary fototra miorina tsara ireo.
Raha te hampifanaraka ireo sary ireo dia tsy maintsy mamorona azy ireo amin'ny fitaovana tsy tohananao ianao. Ho hitako raha mahita tutorial aho.
Tutorial tena tsara! asa tsara voadona.
P.S. Finday tsara ho an'ny asa izy io raha tapaka na misy zavatra tsy mankarary 200 Euro na mihoatra.
Frapp dia hoy izy:
Tutorial tsara. Afaka nametraka firefox OS 2.0 tamin'ny Alcatel OT Fire aho, fa rehefa alefako amin'ny kinova vaovao dia tsy hahafantatra ahy ny karatra sim: S
Fantatrao ve ny olana mety hitranga? Raha tsy mametraka rom hafa aho ary manandrana ...
Valiny amin'i Frapp
jrlafaurie dia hoy izy:
Izaho koa dia nanana an'io olana io ary tsy maintsy nanova ny kinova aho izao manana 1.3, izay marin-toerana, na dia 2.0 sy taty aoriana aza dia efa marin-toerana, izay manana bibikely izay mety tsy irina, manoro ny 1.3 aho
Mamaly an'i jrlafaurie
Namaha azy aho, nametraka ny kinova 2.1 izay tsara aho, afa-tsy ny bateria maharitra kely kokoa aza.
Vao nametraka ny Firefox OS 2.1 ROM avy amin'ny vegnuxmod ny ROM v2.1 20150328 aho, na dia prerelease ROM aza dia mandeha tsara amin'ny Alcatel One Touch Fire-ko.
Ny fampianarana dia tsara ary tsara ny mahafantatra fa betsaka ny olona nisafidy an'ity rafitra ity, ho an'ireo izay tsy nahatakatra fa mieritreritra aho fa tena mazava tsara izany avelako eto ireo rohy hafa izay ahandroan'izy ireo sary ho an'ity telefaona ity koa, antenaiko fa manampy anao aho milaza aminao fa mampiasa ny kinova 2.2 amin'ireto tranonkala ireto aho izao ary tsy misy olana momba ny fatiantoka data satria misy fampianarana momba ny fomba hitsimbinana ilay kinova ankehitriny ary hamerina azy
Misaotra betsaka jrlafaurie ny marina dia, tsy hitako ny kinova Firefox OS 2.0 ho an'ny Alcatel One Touch Fire.
Lazaiko aminao fa nahita ny tutorial Mozilla niaraka tamin'ny sary ofisialy miorina tsara aho.
Sary fototra v18D.zip. Ireto ambany ireto dia manazava ny fomba fametrahana Firefo OS 2.O.
Tsy mandeha amin'ny Alcatel-ko izany satria ny sary namboarin'i Mozilla dia tsy manana fanohanana ny Alcatel One Touch Fire. Raha te hampifanaraka ireo sary ireo dia tsy maintsy mamorona azy ireo amin'ny fitaovana tsy tohananao ianao.
Ireo rohy napetrako tao anaty ny hevitro teo aloha ireo no ampiasaiko hanavao ny telefaoniko satria, araka ny filazanao azy, ny mozilla dia tsy mandeha amin'izany satria tsy manohana azy ireo izy ireo, ary koa amin'ireo tranokala ireo indrindra ny vegnuxmod izay tena ampiasaiko indrindra. OEM azo antoka Nividy ny findaiko tany Venezoelà aho ary manana ny tranon'omby 1.3 ankehitriny avy any Venezoela izay miasa tsara
Adf.ly? , inona no nahatongavantsika
Statick dia hoy izy:
Vao nividy Samsung Galaxy mini S5 ianao ary te hanandrana ny firefox OS amin'ity finday ity, misy tolo-kevitra tokony ho raisiko ???
salama ny vadiko manana an'io finday io fa amin'ny android. raha mikasika azy aho dia mamono ahy ... tsy fantatrao raha azo apetraka amin'ireo dingana ireo amin'ny takelaka ianao?